अष्ट्रेलिया र जापानले लगाए अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध Canada Nepal
Jan 20 2022 | २०७८, माघ ६गते
२०७८, माघ ६गते
निर्वाचनबारे गगन थापाको यस्तो टिप्पणी
आइसीयूमा रहेकी लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
युक्रेनसँगको सीमामा १ लाख रसियाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ, अमेरिकाको बदला लिने चेतावनी
अक्षय कुमारको फिल्म 'बच्चन पाण्डे' होलीको अवसर पारेर रिलिज गरिने
चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ
आफूले गरेको काममा माफी नमाग्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई
कोभिड प्रोटोकल पालना नभएमा त्रिवि परीक्षा स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
तयारी नपुगेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक स्थगित
Copyright © 2022 All right reserved to Canada Nepal
क्यानाडा नेपाल मंसिर १५ २०७८
सिड्नी, १५ मंसिर-अष्ट्रेलिया र जापानले विदेशी विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भाइरसको जाेखिम बढेकाे भन्दै ती देशले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाइ प्रवेशमा राेक लगाएका हुन् । साे निर्णयबाट विभिन्न देशका विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।अस्ट्रेलियाले अ‍ाज १ डिसेम्बरदेखि लागू हुने गरी विदेशी विद्यार्थीमा प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे । याे प्रतिबन्ध दुई सातासम्म लागू हुनेछ ।
जापान सरकारले सोमबार देखि लागू हुने गरी सबै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाे जनाएकाे छ । काेभिडकाे नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि यी दुबै देशले अफ्रिकी मुलुकसँगकाे हवाई यात्रामा राेक लगाएका थिए ।
मंसिर १५, २०७८ बुधवार ०९:२९:३१ बजे : प्रकाशित
तालिवानलाई औपचारिक मान्यता दिन अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्रीको आह्वान
एजेन्सी - अफगानिस्तानका कार्यबहाक प्रधानमन्त्री मोहमद हसन अखुन्दले अफगानिस्तानलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरुलाई आह्वान गरेका छन् । १५ अगस्टमा अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिावानलाई अहिलेसम्म कुनै पनि देशले मान्यता दिएको छैन् ।
‘तालिवान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएर पहिलो राष्ट्र बन्द मुस्लिम देशहरुलाई आह्वान गर्छु । त्यसपछि हामीले चाँडै विकास गर्छौ भन्ने मैले आशा गरेको छ,’ राजधानी काबुलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अखुन्दले भने । अधिकांश देशहरुले तालिवानलाई अझै पनि अतिवादी समूहका रुपमा हेरेका छन् ।
सन् १९९६ देखि सन् २०११ मा पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दा तालिवानले मानवअधिकार उल्लंघनमा रेकर्ड नै तोडेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा तालिवानले सत्ताको वागडोर कसरी हाँक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट निहाल्दै आएको छ ।
विपक्षीप्रति नम्र र प्रजातान्त्रिक ढंगले शासन गर्ने प्रचार गरे पनि तालिवानले महिलामाथि चरम विभेद गरेको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत महिलालाई घरमै बस्न भनिएको छ भने माध्यामिक तहका छात्रालाई विद्यालय जानबाट रोक लगाइएको छ ।
अफगानिस्तानमा आर्थिक र मानवीय संकट चुलिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दर्शाएका छन् ।
माघ ५, २०७८ बुधवार २०:०५:४५ बजे : प्रकाशित
भारतमा बुर्का लगाउने छात्रा कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न नपाउने
एजेन्सी - भारतको एउटा सरकारी कलेजमा बुर्का लगाएका मुसलमान छात्राहरुलाई कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कर्नाटक राज्यको युदुपी जिल्लमा सरकार सञ्चालित कलेजमा मुसलमान छात्राहरुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
हिजाव विद्यालयको पोसाक नभएको र केही छात्राहरुले अनुहार ढाक्ने पोसाक लगाएको भन्दै उनीहरुलाई कक्ष कोठामा पस्न नदिइएको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
आफू कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै शिक्षकले तत्काल बाहिर निस्कन निर्देशन दिएको पीडितमध्येकी एक एएच अलमासले गुनासो गरेकी छिन् ।
हिजाब आफ्नो विश्वासको एउटा अंश भएको र आफूहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गरेको पीडित किशोरीहरुले बताएका छन् । विद्यालयले प्रवेश नदिएपछि ६ जना किशोरीहरु ३१ डिसेम्बरदेखि अनुपस्थित छन् ।
माघ ६, २०७८ बिहिवार ०७:३७:२७ बजे : प्रकाशित
भारतमा भुसको आगो झै फैलियो कोरोना, एकैदिन ३ लाख १५ हजार संक्रमित थपिए
काठमाडौं । भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण र मृत्यु दर बढ्न थालेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख १५ हजार १ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यसअघि एकैदिन २ लाख ७७ हजार संक्रमित फेला परेका थिए ।
हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ करोड ८२ लाख १६ हजार ३ सय ९९ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ९३ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ लाख ८७ हजार ७ सय १९ जना पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख १३ हजार ३ सय ८३ जना निको भएका छन् । भारतमा हालसम्म कोरोनासंक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या ३ करोड ५७ लाख ९६ हजार ४ सय २२ पुगेको छ । सक्रिय संक्रमित १९ लाख ३२ हजार रहेको छ ।
माघ ६, २०७८ बिहिवार ०८:५७:५७ बजे : प्रकाशित
विश्वभर ह्वात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन ३४ लाख संक्रमित थपिए, कुन देशमा कति ?
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस अहिले संसारका विभिन्न देशहरुमा फैलिएको छ । वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक हेर्दा अहिले धेरैजसो देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ३४ लाख १ सय ९२ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि एकैदिन २९ लाख १० हजार ७ सय ३५ संक्रमित थपिएका थिए । यससँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ३३ करोड ९१ लाख १ हजार ४ सय ९२ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ८ हजार ५ सय ८० कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५५ लाख ८२ हजार ८ सय १६ पुगेको छ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १७ लाख २८ हजार ७ सय ८५ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यससँगै हालसम्म विश्वभर २७ करोड २६ लाख ८९ हजार ३ सय ५० कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ८ लाख ८० हजार ५ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ६ करोड ९७ लाख १५ हजार २ सय १४ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा ४ करोड ३७ लाख ५५ हजार ९ सय ३५ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
माघ ६, २०७८ बिहिवार ०९:५३:५२ बजे : प्रकाशित
वाशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आफूले गरेको कामको लागि माफी नमाग्ने बताउँनुभएको छ ।
आफ्मो कार्यकाल एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अफगानिस्तानबाट २० वर्षपछि सजिलै बाहिर निस्कने कुनै उपाय थिएन । जतिसुकै गरे पनि त्यसो गर्नु सम्भव थिएन त्यसैले मैले गरेको कामका लागि म माफी माग्दिनँ ।’ यद्यपि, बाइडेनले अगस्टको मध्यमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि विकसित अफगानिस्तानको सङ्कटप्रति भने सहानुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पोटसले भने कि ‘तालिबानको अयोग्यताको कारण अफगानिस्तानमा के भइरहेको छ’ भनेर आफूलाई नराम्रो लाग्यो ।‘मलाई ती महिला र पुरुषहरूका लागि ठूलो चिन्ता छ जुन उनीहरूमाथि आतङ्कवादी हमलाले विमानस्थलमा पारेको पीडा प्रति दुःख छ ।’
अफगानिस्तानको निर्णयबाट आफ्नो फिर्तीको बचाउ गर्दै बाइडेनले असफलताको लागि अघिल्लो प्रशासनलाई दोष दिनुभएको छ ।
‘यदि हामी बाहिर नआएको भए हामीले धेरै बलहरू भित्र्याउने थियौं... तालिवानको अक्षमताको परिणामको रूपमा के भइरहेको छ भनेर मात्र भएन’ विश्वभरि जेजे भइरहेको छ हामी हरेक समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । र त्यसैले म यसलाई योग्यताको मुद्दाको रूपमा पनि हेर्दिनँ,’ राष्ट्रपति बाइडेनले भन्नुभयो ।
‘एउटै सरकारको अधीनमा अफगानिस्तानलाई एकीकरण गर्न कोही सक्षम हुनेछ भन्ने लाग्छ भने आफ्नो हात उठाउनुहोस् ? यो ठोस कारणका लागि साम्राज्यहरूको चिहान भएको छः यो एकताको लागि संवेदनशील छैन,’ बाइडेनको टिप्पणी छ ।
उहाँले अफगानिस्तानले अमेरिकालाई पारेको आर्थिक बोझको विषय पनि उठाउँनुभएको छ । अमेरिकी सेनालाई अफगानिस्तानमा राख्न निकै खर्च हुने सन्दर्भ उद्धृत गर्दै उहाँले शान्तिपूर्ण समाधानमा कुनै सम्भावना नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।एएनआई
माघ ६, २०७८ बिहिवार १३:३२:०७ बजे : प्रकाशित
एजेन्सी - रसियाली प्रशासन क्रेमलिनले युक्रेनसँगको सीमामा १ लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको एउटा स्याटलाइट तस्विर सार्वजनिक भएकाे छ ।
रसियाले युक्रेनमाथि थप अतिक्रमणको प्रयास गरिरहेको भन्ने अमेरिकी गठबन्धनअन्तर्गतका देशहरुले आरोप लगाइरहेका बेला क्रेमलिनले सीमामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो । बुधबार मात्र अमेरिकी राष्टपति जोन बाइडेनले रसियाले युक्रेनमाथि हमला गर्न खोजेको भन्दै अमेरिकाले बदला लिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
रसियाले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरिरहेका बेला बाइडेन प्रशासनले आर्थिकलगायतका प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिनकेनले रसियाले युक्रेनमाथि नयाँ हमला गर्न सक्ने बताएका छन् ।
युक्रेन विवाद बढ्दै गएको क्रेमलिनले बताउँदै गएको छ । उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन नेटोको विस्तार रोक्न रसियाले अमेरिकासँग माग गर्दै आएको छ ।
माघ ६, २०७८ बिहिवार १४:२५:४३ बजे : प्रकाशित